विर्तामोडमा श्रृजना बस्नेतको ज्यान गएको घटनामा भेटिए यस्ता प्रमाण, प्रहरीलाई ढुङ्गा हा न्ने को हुन् ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > विर्तामोडमा श्रृजना बस्नेतको ज्यान गएको घटनामा भेटिए यस्ता प्रमाण, प्रहरीलाई ढुङ्गा हा न्ने को हुन् ?
Poonam July 13, 2021 July 13, 2021 समाचार, समाज	0
काठमाडौ । विर्तामोडमा सोमवार मृ त फेला परेकी श्रृजना बस्नेतको घटनामा नयाँ तथ्य फेला परेको छ । चौथो तलामा आमा दाइ भाउजुसंग बस्दै आएकी श्रृजनाको श व उनी बस्ने कोठाको तल फेला परेको थियो । प्रत्येक तला र गेटको भित्र समेत ताला लागेको अवस्थामा उनको श व तल बाहिर कसरी आइपुग्यो भन्ने आ शं का उब्जीएको थियो ।
प्रहरीले श व उठाउने क्रममा केही समस्या भएको थियो । घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले ढिलाई गरेको भन्दै आफन्तले विरोध गरेका हुन् । प्रहरीले घटनास्थलमा ढु ङ्गा हा न्ने केही युवालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रवक्ता थापाका अनुसार घटनाको इ लाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अ नुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
इलामको साखेजुङ्ग मुल घर भएकी बस्नेत आफ्नी आमा तथा दाजुको परिवारसँग केही बर्षदेखि बिर्तामोड ५ स्थित सानिमाको घरमा भाडामा बस्दै आएकी थि इन् । उक्त घरमा प्रायः पारिवारिक नाता पर्ने मानिसहरु नै बस्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । उनी एक सहकारीमा काम पनि गर्थिन ।
दलित युवाले श्रेष्ठ युवतीसंग गरेको विवाह छुटेपछि कहिले नआउने गरेर यो संसारलाई छोडेर भगवान संग गए
कसरी आइपुगे त्रिभुवन बिमानस्थल हुँदै यस्ता ब्यक्ति ?
दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर !
दुवईमा भएका श्रीमान भन्छन्ः रोजिनाले म'र्नु अघि मलाई भनेकि थिइन ‘म त संसार छोडे है’